Yakanakisa Chipatara fenicha zero-yekugadzirisa dhizaini actuator yakazvimiririra ine hydraulic actuator Mugadziri uye Fekitori | Simba-Packer
Chipatara fenicha zero-yekugadzirisa dhizaini dhizaini actuator yakazvimirira ine hydraulic actuator
• Stretcher Actuator inovimbika yega-ine hydraulic actuator yekushandisa mune machira uye matirori evarwere. Iyo pombi, humburumbira, nhungamiro, mavhavha nedura zvakabatanidzwa kuita chinhu chimwe chete, chisina-chekuita.
• Iyo Stretcher Actuator pamwe neyakaunganidzwa nhungamiro inogona kubata yakakwira padivi mitoro. Naizvozvo, hapana chekuwedzera actuation kana yekutsigira mashandiro anodikanwa mukugadzirwa kweiyo yakatambanudzwa uye trolley yemurwere. Izvi zvinoguma nemitengo yakaderera yekugadzira. Iyo Stretcher Actuator iri nyore kuisa uye yakavakirwa kwehupenyu hwakareba.
Tora kutorwa nekuita kwedu
Tinopa huwandu hwakazara hwemanyore-hydraulic uye electro-hydraulic actuator ekushandisa anosanganisira chaiwo kufamba mune yakachena nharaunda. Yepamberi mhinduro dzekugadzirisa kukwirira, kugadzirisa backrest, trendelenburg / anti- trendelenburg uye nezvimwe. Kwemakore makumi mashanu, edu anoshanda ekurapa ekushandisa akaratidzira iwo mhando yavo mune yekurapa fenicha yevatungamiriri vepasi vanotungamira. Izvo zvinoita Power-Packer mutungamiri weindasitiri mune compact asi ine simba inodzora mhinduro mhinduro.
Murwere nyaradzo uye chengetedzo zvakakosha panguva yekutakura. Uye vashandi vezvokurapa vanovimba nemidziyo inoita isina mhosva nguva dzese. Power Packer's Stretcher Actuator inogara iri parunhare uye yakagadzirira kuita. Iyi yakavimbika, inozvibata ine hydraulic actuator yakanyatsogadzirirwa kuti ishandiswe mune yakatambanudzwa uye nematiraki, uye maficha akavakirwa-mukati kutungamira kubata yakakwira-padivi mitoro. Izvi zvinoreva kuti hapana chekuwedzera actuation kana yekutsigira mashandiro anodikanwa mukutambanudza kana dhizaini dhizaini, iyo inogona kudzikisira yako yakazara yekugadzira mitengo. Kupa zvakakwana mashandiro, iyo pombi, humburumbira, mavhavha uye dhamu zvakabatanidzwa kuita chinhu chimwe, chisina-chekuchengetedza. Power-Packer's Stretcher Actuator iri nyore kuisa uye kuvakira hupenyu hwakareba.
Yakanyarara, inoshanda mushe
Enhanced performance uye opareta nyaradzo
Kurumidza, yakatemwa nguva yekudzika
Inoderedza zvese zvekugadzirisa zvigadzirwa uye mutengo-we-muridzi wevashandisi vekupedzisira
Inoda hapana chekunze simba
Stretcher Actuator Magadzirirwo
Stroke urefu: 235 mamirimita (9.3 ") 330 mamirimita (13.0 ")
Yakavharwa kureba pakati pekukwirisa mapoinzi: 285 mamirimita (11.2 ") 349 mamirimita (13.7 ")
Simba rekumanikidza simba rekumanikidza: 4.5 kN (makirogiramu chiuru.) 4.5 kN (makirogiramu chiuru.)
Maximum static mutoro: 8 kN (1,798 lbs.) 8 kN (1,798 lbs.)
Kunonyanyisa pombi kurohwa kusvika kwakareba kureba: 14 20
Kunonyanyisa kunofambira mberi torque pane plunger: 290 Nm (214 ft.-lbs.) 290 Nm (214 ft.-lbs.)
Kuburuka nguva: 3-6 sec 4-8 sec
Imwe yekuita silinda
Kudzika kudzora: kuyerera kudzora vharafu
Pressure yekuyamura vharafu: yakaiswa
Stretcher Actuator Zvishandiso
Nei uchisarudza Power-Packer
Chengetedza kuchengetedzeka, rakanakisa opareta uye murwere nyaradzo
Yakakwirira zviyero zvemhando yepamusoro IATF 16949
Kuita kwakavimbika munzvimbo dzakachena
Yepasi rese yekugadzira tsoka
Dhizaini uye hunyanzvi hweinjiniya
Pashure: CNHTC SITRAK Cylinder Yekutengesa Mota Cab Cab Tilt System
Zvadaro: Chiremba mubhedha wakatsetseka kuita MK5 compact inozvibata-ine hydraulic actuator
Chipatara Mubhedha Mk5 Hydraulic Actuator
Chiremba Mubhedha Mk5 Hydraulic Actuator
Mk5 Chiremba Hydraulic Actuator
Tambanudza Actuator Hydraulic Actuator
Medical mubhedha wakatsetseka waivako MK5 chiine kuzvidzora ...